छोरीलाई किन छोरा सम्झने? - Khulanews
एकपटक सम्झनुहोस् त, तपाईँको घरमा छोरा जन्मँदा भएको परिवारको रियाक्सन र छोरी जन्मँदाको रियाक्सन… अरूको किन, तपाईँ आफैँले कस्तो अनुभव गर्नुभयो, एकपटक टक्क आँखा चिम्लेर सम्झनुहोस् त? तपाईँको अनुभवले नै तपाईँलाई तपाईँले महिला र पुरुषबिच गर्ने समानता वा भिन्नताबारे उत्तर दिन्छ। ठूलो स्वरमा म पुरूष र महिलामा भिन्नता गर्दिनँ भनेर तर्क र दाबी त गर्नुहोला तर, तपाईँ स्वयम्ले गरेको अनुभव नै तपाईँको सोच हो। हो यही भिन्नता देख्ने सोच बदल्नुछ। यो सोच नबदलिएसम्म हाम्रो जस्तो मुलुकमा जहाँको नेतृत्वले कानुनमा उल्लेख भएका कुरालाई त मतलब नगरी महिलालाई वेवास्ता गर्छ, परिवर्तन हुन गाह्रो छ।